Burmese taste - Iora: February 2011
Posted by Iora at 2:56 AM3comments: Links to this post
၁. ကောက်ညင်းပေါင်း နဲ့ ငါးရံ့ ခြောက်၊ ပဲပြုတ်၊ မတ်ပဲကြော်
၂. ထမနဲ နဲ့ ကော်ဖီပြင်းပြင်း
၃. ဆီထမင်း နဲ့ငါးခြောက်ကြော်
၄. အာလူး ပူရီ
၅. အာလူးပူရီ အတွက် ဗယာကြော်
ဖက်ထုတ်ရွက် ကုို ကြော်ထားတဲ့ ပူရီ
၈. မုန့် ဟင်းခါး
၉ . အာပူလျှာပူ
၁၁. တိုဖူးသုတ် နဲ့ ထမင်း
၁၂. ဘယ်ဘက် ကတိုဖူးသုတ်၊ ညာဘက် က ခေါက်ဆွဲသုတ်
၁၄. ဘူးသီးကြော် နဲ့ထမင်းဆီဆမ်း
၁၅. Tiny sandwich with cheese and veggie
၁၆. မုန့် ဟင်းခါး
၁၇. သိပ်မကြိုက် တဲ့ ဘုိုစာ
ကိုယ့်အတွက် ကြက်ဥက အကျက်
၁၈. တိုဖူးကြော် နဲ့ရောသုတ်တဲ့ တိုဖူးသုတ် (ဒီတိုဖူးက ကိုယ်တိုင် လုပ်တာ၊ ကျန်တဲ့ တိုဖူးတွေ က သူငယ်ချင်းပေးတာပါ)
Posted by Iora at 2:28 AM 10 comments: Links to this post
Posted by Iora at 10:01 PM9comments: Links to this post